Hampiala voly ireo mpankafy etsy amin’ny Le glacier Analakely i Jean Rigo
Seho miavaka indray no hoentin’i Jean Rigo etsy amin’ny Le glacier Analakely, anio manomboka amin’ny 8 ora alina. Mpanakanto zokiny manana ny maha izy azy eo amin’ny sehatry ny mozika i Jean Rigo, ny gadona zouk love no tena nahafantarana azy ity hatramin’izay fa manao gadona hafa ihany koa izy. Hitondra ireo hira nahakalaza azy hatramin’izay i Jean Rigo amin’ity seho takariva hotontosainy hampiala voly ireo mpankafy azy ity. Mampanantena fahafaham-po tanteraka ity mpanakanto ity amin’io fotoana.
Hampilanonana ny Le Louvre 313 Antaninarenina ny tarika Mapingo
Ela tsy tazana. Tarika fantatra eo amin’ny gadona jazz i Mapingo. Anio manomboka amin’ny 7 ora sy sasany eo no hiaka-tsehatra etsy amin’ny Le Louvre 313 Antaninarenina ity tarika avy any amin’ny tapany avaratry ny Nosy ity. Mampanantena ambiansy ho an’ireo mpankafy ny gadona jazz ho avy hanotrona hatramin’izay ny tarika.
Hampiara-peo etsy amin’ny Trass Tsiadana i Nanie sy Rija Ramanantoanina
Seho gaovam-be miavaka indray no hotontosain’i Nanie sy Rija Ramanantoanina etsy amin’ny Trass Tsiadana, anio manomboka amin’ny 9 ora alina. Mpanakanto samy manana ny maha izy azy eo amin’ny tontolon’ny mozika izy mianadahy ireto izay hampiara-peo amin’ity alina miavaka ity. Ny mozika milamindamina no hoentin’ireto mpanakanto kalaza ireto hanome fahafaham-po ireo mpankafy ho tonga hanotrona amin’io fotoana io. Na dia eo aza ny fampiaraham-peon’izy roa ireto dia samy haneho ny talentany ihany koa izy ireo amin’io fotoana miavaka io.
Hanafana ny sehatry ny Jao’s Pub etsy Ambohipo i Fiyah
Hafotaka indray koa etsy amin’ny toeram-pilanonana Jao’s Pub Ambohipo, anio manomboka amin’ny 8 ora. Andriambavilanitra miangaly ny mozika mafana sy milamindamina ihany koa i Fiyah. Ny ambiansy « viavy machiro » no hitondran’ity mpanakanto ity ny seho takariva miavaka hotontosainy amin’io fotoana io. Hisy ihany koa ny fahatongavan’ny mpanakanto tsy ampoizina hanampy azy amin’io. Hafana araka izany ny lanonana ka ny masoandro miposaka indray no hampalahelo. Ambiansy tropikaly tanteraka no hahazo vahana amin’io.
Hanasongadina ny talentany etsy amin’ny Hotel de l’avenir Analakely i Lamtah
Anio manomboka amin’ny 9 ora alina hanome fahafaham-po ireo mpankafy azy etsy amin’ny Hotel l’avenir Analakely i Lamtah. Mpanakanto avy any amin’ny faritra atsimo iny ny tovolahy ary ny gadona rnb no nahafantarana azy ity eo amin’ny sehatry ny mozika. Mampanantena ambiansy ho an’ireo mpankafy ny mpanakanto amin’io fotoana io. Hitondra ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay i Lamtah, toy ny « toliara gyal » sy « kilimity » sns.